CAJIIB: David De Gea Oo Go'doonkii Muuqaal Cusub Kala Soo Laabtay Iyo Tababarkii United Oo Si Rasmi Ah U Bilawday. - Gool24.Net
CAJIIB: David De Gea Oo Go’doonkii Muuqaal Cusub Kala Soo Laabtay Iyo Tababarkii United Oo Si Rasmi Ah U Bilawday.
Kadib markii ay kooxaha Premier league isniintii shalay si rasmi ah cod aqlabiyad ah ugu ansixiyeen in tababarka lagu soo laabto waxay Manchester United galankii danbe ee maanta oo talaado ahayd ay ku soo laabteen xarunta ay labada bilood iyo maalmaha ka maqnaayeen ee Carrington.
Goolhayaha Manchester United ee David De Gea ayaa noqday shaqsiga dareenka kamaradaha warbaahinta soo jiitay kadib markii uu muuqaal cusub kala soo laabtay go’doonkii labada bilood iyo maalmaha ahaa.
Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa ugu danbayn dib ula kulmay ciyaartoyda kooxdiisa Manchester United ee ay go’doonka ku soo kala jireen labada bilood wuxuuna maanta dib u arkay ciyaartoyda kooxdiisa oo shaqada bilaabay.
Manchester United ayaa dagaal ugu jirta in ay ku soo baxdo kaalmaha sare ee Champions League wuxuuna Ole Gunnar Solskjaer haddaba bilaabay in uu ku shaqeeyo ciyaartoyda kooxdiisa oo markii ugu horaysay tababarka wadarta ciyaartoyda loo ogolaaday.
Laakiin qorshaha uu Ole Gunnar Solskjaer raacayo ayaa ah in tababarka uu ku bixiyo min shan ciyaartoy oo fogaan min laba mitir ah isku jirsanaya marka ay tababarka samaynayaan si xaalada loo xakamayn karo.
Haddaba markii ay ciyaartoyda Manchester United soo galeen xarunta tababarka ee Carrington waxaa la arkay goolhaye David De Gea oo gadh aad u dheer soo yeeshay isla markaana uu isbadal wayni ku soo dhacay intii uu go’doonka ku jiray.
Markii la arkay isbaalka ka muuqday wajiga De Gea waxaa markiiba sawiradiisa dareen looga bixiyay baraha bulshada iyada oo goolhayaha reer Spain uu gaadh wayn kala soo laabtay gurigiisa uu ku xanibnaa.
Wajiga kowaad ee tababarka kooxaha Premier League ayaa la raaci doonaa tilmaamaha caafimaadka ee ciyaartoyda loo kala fogaynayo waxaana si joogto ah loo samayn doonaa baadhitaano.
Maamulka Premier league ayaa maanta shaaciyay in ciyaartoydii kooxaha Premier League ee la baadhay ay 6 ka mid ahi noqdeen kuwo la nool fayraska karoonaha taas oo muujinaysa in baadhitaanka la joogtayn doono ka hor inta aan xili ciyaareedka la bilaabin.
Tababarkii ugu horeeyay ee Manchester United ay sida rasmiga ah ugu soo laabtay waxaa ka soo muuqday xidiga waqtiga badan xili ciyaareedkan maqnaa ee Pual Pogba.
Sawirada iyo xogta ka soo kordha tababarka Man United isla halkan ayaanu idiinku soo kordhin doonaa insha Allah.